ဘေးအတန်တန် ရန်အသွယ်သွယ် အန္တရာယ်မှန်သမျှကင်းဝေးသည့် ထောင်တန် ဂါထာတော် - Myanmar Express
ဘေးအတန်တန် ရန်အသွယ်သွယ် အန္တရာယ်မှန်သမျှကင်းဝေးသည့် ထောင်တန် ဂါထာတော်
March 18, 2020 By Myanmar Express in တရားအဆုံးအမများ No Comments Tags: ဂါထာ
” ဒိဝါတပတိ ဂါထာ “(သို့ မဟုတ်)(သဗ္ဗဇယ မင်္ဂလာဂါထာ)
ဒီဂါထာတော်ကြီးဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင် နူတ်ခပတ်တော်ကနေ ဟောပြောခဲ့ တဲ့ ဂါထာတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
တထောင်တန် ဂါထာလို့လဲ ခေါ်တွင်ခဲ့ကျပါတယ်..
ရှေးအခါ ဘာတိက မင်းတရားကြီးက ပူဇော်ပွဲ တခုပြုလုပ်တဲ့အချိန် အမတ်ကြီး တပါးကို ရတနာသုံးပါးလုံးပါဝင်တဲ့ ဂါထာတပုဒ်ရွှတ်ခိုင်းရာ
ဒိဝါတပတိ ဂါထာကို ရွှတ်ပြခဲ့ ပါတယ် ဘုရင်က နှစ်သက် သဘောကျလွန်း လို့ အသပြာတထောင်ထုတ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ ရာက တထောင်တန်ဂါထာ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်..
သီတင်းကျွတ်လပြည့််နေ့ညနေ ဆည်းဆာ အခါ မြတ်စွာဘုရားရှင် တရားဟောရာနေရာ၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် အောက်ပါတင့်တယ်လှပမှု့ အလှ (၅) မျိူးကို မြင်တော်မူ၏။
၁။ မင်းဝတ်တန်ဆာ ရတနာများ ဝတ်ဆင်ထားသည် ပသေနဒီ ကောသလမင်းကြီး၏ တင့်တယ်လှပမှု့။
၂။ ဈန်သမာပတ်တွေဝင်စားနေသဖြင့် ရွှေအဆင်းကဲ့ သို့ ဝါဝင်းတင့်တယ်လှပတော်မူသည့် ရဟန်းတာ အရှင် ကာဠုဒါယီ၏အလှ။
၃။ ညနေဆည်းဆာ အချိန်ခါ၌ ကောင်းကင်က ထွက်စပြု့ လမင်း၏ ညနေ ခင်းအစ တင့်တယ်လှပမှု့အလှ။
၄။ ညနေဆည်းဆာအချိန်အခါ၌ ကောင်းကင်ကဝင်တော့မည်ဆဲဆဲ နေမင်း၏ တင့်တယ်လှပမှု့ အလှ။
၅။ နေ ၊ လ ၊ ဘုရင် ၊ ရှင်ရဟန္တာ တို့၏ တင့်တယ်လှပမှု့ထက် ပိုမိုတင့်တယ် လှပတော်မူသည့် မြတ်စွာဘုရား၏တင့်တယ်မှု့ အလှ(၅) မျိူးကို
ရှင်အာနန္ဒာ တွေ့မြင်တော်မူသောအခါ ….
ရှင်တော်မြတ်ဘုရား တပည့်တော် အာနန္ဒာ တင့်တယ်လှပမှု့ အလှ (၅) မျိူး ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ် ဘုရား။
အဲ့ဒီ တင့်တယ်လှပမှု့ ငါ့မျိူးတိုိ့ထဲမှာ
“ရှင်တော်မြတ် ဘုရားသည် အတင့်တယ်ဆုံး အလှပဆုံး အတောက်ပဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား ” ဟုအားပါတရ လျှောက်ထားပါတယ်။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက အောက်ဖော်ပြပါ ဂါထာကိုဟောကြားတော်မူပါတယ် –
ဒိဝါတပတိ အာဒ္ဓိစော၊ ရတ္တိမာ ဗာတိ စန္ဒိမာ
သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ၊ ဈာယီ တပတီ ဗြဟ္မဏော။
အထ သဗ္ဗမဟော ရတ္တိံ ဗုဒ္ဓေါတပတီ တေဇသာ။
၁။ နေမင်းဆိုတာ နေ့အခါမှာသာ တင့်တယ် တောက်ပ လှပနေနိုင်တယ်။
၂။ လမင်းဆိုတာ ညအခါမှာသာ တင့်တယ် တောက်ပ လှပနေနိုင်တယ်။
၃။ မင်းဆိုတာ အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ စစ်သည် များစွာခြံရံပြီး မင်းဝတ်တန်ဆာ ရတနာအလှ ဝတ် ဆင်မှသာ တင့်တယ်တောက်ပ လှပနိုင်တယ်။
၄။ ရဟန္တာ ဆိုတာ ဈန် သမာပတ်တွေ ဝင်စားနေမှ တင့်တယ်တောက်ပ လှပနိုင်တယ်။
ထိုလေးဖြာတို့ရဲ့ တင့်တယ်တောက်ပမှူဟာ အချိန် ပိုင်းခြား ကန့်သတ်ချက်နဲ့ တင့်တယ်တောက်ပ လှပပါတယ်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ ဈန်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ မဝင်စားသည်ဖြစ်စေ ရဟန်းအသုံးဆောင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အခါမှာရော ဝတ်ဆင်မထားသည့် အခါမှာရော တန်ခိုးတော် အမျိူးမျိူး ဖြင့် နေ့နေ့ ညည အချိန်တိုင်းမှာ
တင့်တယ် တောက်ပ နေပါတယ်လိုိ့ မှတ်သားထားလိုက်ပါ ချစ်သော အာနန္ဒာ…..
၅။ မြတ်စွာဘုရားသည် ” သီလ ၊ ဂုဏ ၊ ပညာ ၊ ပုည ၊ ဓမ္မ ” ဆိုတဲ့ တန်ခိုး (၅)မျိူး ဖြင့် နေ့ရော ညပါ အခါခပ်သိမ်း အမြဲတစေ တင့်တယ်တောက်ပ လှပနေပါတယ်ဟု ပြောကြားပြုသည့်အဆုံး ဒီဂါထာတရား နိဂုံးမှာ များစွာ သိန်းသောင်း သတ္တဝါ အပေါင်းတွေဟာ သောတပန် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
မိမိ တို့ ဘဝ မှာ… လောကဓံ တရားရဲ့ အနိမ့် အမြင့် ကြုံ ရတဲ့ အခါတိုင်း
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားဒေသနာတော်တွေ အပြင် ဂါထာ အမျိူး ရွှတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတွေ အပြင်
မြတ်စွာဘုရားရှင် ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ နဲ့ ပုတီးစိပ် ပူဇော်ခြင်း အဓိဌာန် ဝင်ခြင်းတွေ က ကုသိုလ်ရ ကံပွင့် စေမှာပါ
လောကီ လောကုတ္တရာ မင်္ဂလာအမျိူးမျိူး ချမ်းသာအမျိူးမျိူး ကောင်းခြင်းအမျိူးမျိူး ရာထူးဂုဏ် သိမ် အရှိန်အဝါ အမျိူးမျိူး အောင်ခြင်း အမျိူးမျိူး တိုးတက်ရရှိပြီး ဘေးအတန်တန် ရန်အသွယ်သွယ် အန္တရာယ်မှန်သမျှကင်းဝေးလိုလျှင် အတင့်တယ်ဆုံး ကောင်းကျိူးတွေရလိုလျှင်…….
ဤ ” ဒိဝါတပတိဂါထာ ” ကို အမြဲ နေ့ည သတိရကာ သက်စေ့ ရွတ်ဆိုကြပါ။
ပိုပြီး ထိရောက် လိုလျှင် ထိုဂါထာတော်ကြီးကို…
ပုတီးစိပ် ပူဇော်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..
Credit :Thida Phyu‎
ဘေးအတနျတနျ ရနျအသှယျသှယျ အန်တရာယျမှနျသမြှကငျးဝေးသညျ့ ထောငျတနျ ဂါထာတျော
” ဒိဝါတပတိ ဂါထာ “(သို့မဟုတျ)(သဗ်ဗဇယ မင်ျဂလာဂါထာ)
ဒီဂါထာတျောကွီးဟာ မွတျစှာဘုရားရှငျ နူတျခပတျတျောကနေ ဟောပွောခဲ့ တဲ့ ဂါထာတပုဒျဖွဈပါတယျ
တထောငျတနျ ဂါထာလို့ လဲ ချေါတှငျခဲ့ကပြါတယျ..
ရှေးအခါ ဘာတိက မငျးတရားကွီးက ပူဇျောပှဲ တခုပွုလုပျတဲ့အခြိနျ အမတျကွီး တပါးကို ရတနာသုံးပါးလုံးပါဝငျတဲ့ ဂါထာတပုဒျရှတျခိုငျးရာ
ဒိဝါတပတိ ဂါထာကို ရှတျပွခဲ့ ပါတယျ ဘုရငျက နှဈသကျ သဘောကလြှနျး လို့ အသပွာတထောငျထုတျ ခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ ရာက တထောငျတနျဂါထာ ဆိုပွီး နာမညျကွီးခဲ့ပါတယျ..
သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ ညနေ ဆညျးဆာ အခါ မွတျစှာဘုရားရှငျ တရားဟောရာနရော၌ ရှငျအာနန်ဒာသညျ အောကျပါတငျ့တယျလှပမှု့ အလှ (၅) မြိူးကို မွငျတျောမူ၏။
၁။ မငျးဝတျတနျဆာ ရတနာမြား ဝတျဆငျထားသညျ ပသနေဒီ ကောသလမငျးကွီး၏ တငျ့တယျလှပမှု့။
၂။ ဈနျသမာပတျတှဝေငျစားနသေဖွငျ့ ရှအေဆငျးကဲ့ သို့ ဝါဝငျးတငျ့တယျလှပတျောမူသညျ့ ရဟနျးတာ အရှငျ ကာဠုဒါယီ၏အလှ။
၃။ ညနဆေညျးဆာ အခြိနျခါ၌ ကောငျးကငျက ထှကျစပွု့ လမငျး၏ ညနေ ခငျးအစ တငျ့တယျလှပမှု့အလှ။
၄။ ညနဆေညျးဆာအခြိနျအခါ၌ ကောငျးကငျကဝငျတော့မညျဆဲဆဲ နမေငျး၏ တငျ့တယျလှပမှု့ အလှ။
၅။ နေ ၊ လ ၊ ဘုရငျ ၊ ရှငျရဟန်တာ တို့၏ တငျ့တယျလှပမှု့ထကျ ပိုမိုတငျ့တယျ လှပတျောမူသညျ့ မွတျစှာဘုရား၏တငျ့တယျမှု့ အလှ(၅) မြိူးကို
ရှငျအာနန်ဒာ တှမွေ့ငျတျောမူသောအခါ ….
ရှငျတျောမွတျဘုရား တပညျ့တျော အာနန်ဒာ တငျ့တယျလှပမှု့ အလှ (၅) မြိူး ကိုတှမွေ့ငျရပါတယျ ဘုရား။
အဲ့ဒီ တငျ့တယျလှပမှု့ ငါ့မြိူးတိုိ့ထဲမှာ
“ရှငျတျောမွတျ ဘုရားသညျ အတငျ့တယျဆုံး အလှပဆုံး အတောကျပဆုံး ဖွဈပါတယျဘုရား ” ဟုအားပါတရ လြှောကျထားပါတယျ။
ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားက အောကျဖျောပွပါ ဂါထာကိုဟောကွားတျောမူပါတယျ –
ဒိဝါတပတိ အာဒ်ဓိစော၊ ရတ်တိမာ ဗာတိ စန်ဒိမာ
သန်နဒ်ဓေါ ခတ်တိယော တပတိ၊ ဈာယီ တပတီ ဗွဟ်မဏော။
အထ သဗ်ဗမဟော ရတ်တိံ ဗုဒ်ဓေါတပတီ တဇေသာ။
၁။ နမေငျးဆိုတာ နအေ့ခါမှာသာ တငျ့တယျ တောကျပ လှပနနေိုငျတယျ။
၂။ လမငျးဆိုတာ ညအခါမှာသာ တငျ့တယျ တောကျပ လှပနနေိုငျတယျ။
၃။ မငျးဆိုတာ အင်ျဂါလေးပါးနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ စဈသညျ မြားစှာခွံရံပွီး မငျးဝတျတနျဆာ ရတနာအလှ ဝတျ ဆငျမှသာ တငျ့တယျတောကျပ လှပနိုငျတယျ။
၄။ ရဟန်တာ ဆိုတာ ဈနျ သမာပတျတှေ ဝငျစားနမှေ တငျ့တယျတောကျပ လှပနိုငျတယျ။
ထိုလေးဖွာတို့ရဲ့ တငျ့တယျတောကျပမှူဟာ အခြိနျ ပိုငျးခွား ကနျ့သတျခကျြနဲ့ တငျ့တယျတောကျပ လှပပါတယျ
မွတျစှာဘုရားရှငျကတော့ ဈနျဝငျစားသညျဖွဈစေ မဝငျစားသညျဖွဈစေ ရဟနျးအသုံးဆောငျ ဝတျဆငျထားသညျ့ အခါမှာရော ဝတျဆငျမထားသညျ့ အခါမှာရော တနျခိုးတျော အမြိူးမြိူး ဖွငျ့ နနေ့ေ့ ညည အခြိနျတိုငျးမှာ
တငျ့တယျ တောကျပ နပေါတယျလိုိ့ မှတျသားထားလိုကျပါ ခဈြသော အာနန်ဒာ…..
၅။ မွတျစှာဘုရားသညျ ” သီလ ၊ ဂုဏ ၊ ပညာ ၊ ပုည ၊ ဓမ်မ ” ဆိုတဲ့ တနျခိုး (၅)မြိူး ဖွငျ့ နရေ့ော ညပါ အခါခပျသိမျး အမွဲတစေ တငျ့တယျတောကျပ လှပနပေါတယျဟု ပွောကွားပွုသညျ့အဆုံး ဒီဂါထာတရား နိဂုံးမှာ မြားစှာ သိနျးသောငျး သတ်တဝါ အပေါငျးတှဟော သောတပနျ စတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ တှေ ဖွဈသှားကွပါတယျ။
မိမိ တို့ဘဝ မှာ… လောကဓံ တရားရဲ့ အနိမျ့ အမွငျ့ ကွုံ ရတဲ့ အခါတိုငျး
မွတျစှာဘုရားရှငျရဲ့ တရားဒသေနာတျောတှေ အပွငျ ဂါထာ အမြိူး ရှတျဖတျပူဇျောခွငျးတှေ အပွငျ
မွတျစှာဘုရားရှငျ ရဲ့ ဂုဏျတျောတှေ နဲ့ ပုတီးစိပျ ပူဇျောခွငျး အဓိဌာနျ ဝငျခွငျးတှေ က ကုသိုလျရ ကံပှငျ့ စမှောပါ
လောကီ လောကုတ်တရာ မင်ျဂလာအမြိူးမြိူး ခမျြးသာအမြိူးမြိူး ကောငျးခွငျးအမြိူးမြိူး ရာထူးဂုဏျ သိမျ အရှိနျအဝါ အမြိူးမြိူး အောငျခွငျး အမြိူးမြိူး တိုးတကျရရှိပွီး ဘေးအတနျတနျ ရနျအသှယျသှယျ အန်တရာယျမှနျသမြှကငျးဝေးလိုလြှငျ အတငျ့တယျဆုံး ကောငျးကြိူးတှရေလိုလြှငျ…….
ဤ ” ဒိဝါတပတိဂါထာ ” ကို အမွဲ နညေ့ သတိရကာ သကျစေ့ ရှတျဆိုကွပါ။
ပိုပွီး ထိရောကျ လိုလြှငျ ထိုဂါထာတျောကွီးကို…
ပုတီးစိပျ ပူဇျောကွဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ..
« လက်သန့််ဆေးရည် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း	» မြန်မာပြည်ကို သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းသော ထိုင်းမင်းသမီးလေး
Katy Perry နဲ့မတွေ့ခင် ရှေ့ ၆ လလုံး လိင်ကိစ္စလုံးဝမလုပ်ခဲ့တဲ့ Orlando Bloom
အပြာဗီဒီယိုတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်အခမဲ့ကြည့်ခွင့်ပေးခဲ့ရာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ဝက်ဆိုက်ဒ်ပြုတ်ကျ